Uhuru iyo Ruto oo seegay ka qeyb galida munasabada lagu dahfuraayay aqalka barlamaanka ee wakiilada countigan Nairobi – The Voice of Northeastern Kenya
Uhuru iyo Ruto oo seegay ka qeyb galida munasabada lagu dahfuraayay aqalka barlamaanka ee wakiilada countigan Nairobi
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa Munaasabadd maanta lagu dahfuraayay aqalka hoose ee barlamaanka ee wakiilada countigan Nairobi seegay waxana xafladaas ku yimid dib u dhac kadib marki u madaxweynaha uusan waqtigi la doonayay uusan soo gaarin si xaflada ay u bilaabato.
Madaxweynaha ayaa marki dambe sheegay in u soo xadiri doono xafladaas.
Xafladaas ayaa lagu waday in ay bilaabato 9 subaxnimo ee saaka,ilo wareedyo lagu kalsoonani karo eek u sugan hoolka weyn ee city Hall ayaa waxa ay sheegen in u madaxweynaha baajiyay in u xadiro xafladaas isago sheegay in u waxyaba kale u ku mashquulsan yahay.
Gudoomiyaha gudiga la xisaabtanka dadweynaha Robert Mbatia ayaa waxa u sheegay in isbaadla ku yimid martida la casuumay ay dib u dhac ku keentay in si rasmi ah ay u bilaabato xafladaas.
Gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wato ayaa waxa u sheegay in lagu waday in u madaxweyne kuxigeenka buuxiyo booska martinimo ee madaxweynaha balse uu isna baajiyay kadib marki qaar kamid ah wakiilada barlamaankaasi ay ku goodiyen in ay isaga bixi doonan kalfadhigaas.
Aqalka barlamaanka hoose ee wakiilada Narobi ayaa kadib dayactirka lagu sameeyay waxa uu u ekaaday sida aqalka barlamaanka dalka.
Wakiilaad aqalka barlamaanka hoose ee countiga Nairobi kuwooda matala isbahaysiga mucaaradka dalka ee Cord ayaa waxa ay ku goodiyen in ay carqaladeyn doonan xafladaas kadib marki ay hoggaamiyaasha aqalkaas ku guuldareesten in ay casuuman Raila Odinga.
← Dagaalyahanada mucaaradka ee FSA oo ku sii siqaayo magaalada manbij
Arday kuliyada caafimaadka baranaayay oo lala xiriiriyay kooxda ISIL oo la maxkamadeyn doono →